Firaisan-tsaina amin’i Afrika : Fankalazana ny Fahasamihafana Ao Venezoela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Septambra 2016 11:05 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Nederlands, русский, bahasa Indonesia, Español
Sary mampiseho mpianatra ny dihy Folk Venezoeliana, nozarain'i Camerino Company tamin'ny tambajotra. Dikasary tamin'ny lahatsary nozarainy tao amin'ny aterineto
Nanasongadina fanehoana ara-kolontsaina ahafahana mampiavaka azy ny ankamaroan'ny mpisera aterineto tany Venezoela nandritra ny andro fankalazana Andro Manerantanin'ny Fitambaram-pomba , tamin'ny 22 aogositra lasa teo. Anisan'izany, ny dihy manana fototra amin'ny kolontsaina afrikana izay manana anjara toerana lehibe amin’ny toe-tsaina maha Venezoelana.
Ohatra iray amin'izany ity lahatsarin'ny Camerino Company, tamin'ny alalan'i Drone Venezuela, izay efa mihoatra ny 200.000 no nitsidika ary maro no naneho hevitra tanatiny, izay nampanembona ireo Venezoelana am-pielezana.
Ny lahatsary dia manasongadina ny lazaina hoe dihin'amponga, izay niainga avy amin'ny morontsiraka avaratr'i Venezoelà, ary azo heverina ho endrika kolontsaina Afro-Venezoelàna malaza indrindra eo anivon’ny tanora Venezoelàna. Na ny avy any amin'ny morontsiraka na ny avy amin'ny afovoan-tany dia mahazatra amin'ny lanonana ny manoka-toerana hihainoana sy andihizana ny mozikan'amponga.
Asehon'ny lahatsary eo ambony ny endrika maro samihafa mampiaraka ny nentin-drazana amin'ny maoderina, fangaro mety mandrisika olona maro kokoa hankafy sy handray anjara. Ny lahatsarin'ny Camerino Company dia ohatra iray mampiseho endrika ara-kolontsaina mety hanana toerana eo amin'ny dihy akademika sady mitazona azy ho ao anatin'ny fetim-bahoaka.
“Afrika mody any Karaiba”
Mampisy fiantraikany ara-kolontsaina goavana amin'io firenena io ny fisian’ny Ranomasin'i Karaiba mahazo vahana avy eny amin'ny tendrony ilany mankany amin'ny tendrony iray hafa ao avaratr’i Venezoela. Na dia talohan'ny fanjakazakana espaniola aza dia nahitana fahavitrihana ara-varotra sy ara-kolotsaina nifamezivezen'ny vahoaka teratany hatreny amin'ny tendrony iray mankany amin'ny hafa io morontsiraka lehibe io. Nanomboka teo dia tsy nitsahatra intsony ny fivezivezena.
Nandritra ny diany fahatelo tamin'ny 1498, tonga tao amin’ny Tierra de Gracia na “Tanim-pahasoavana” izay nofehezin'ny vahoaka vazimba teratany fantatra amin'ny hoe Caribes i Cristobal Colón (Christoph Colomb). 30 taona taty aoriana; nanomboka nampidirin'ny Eoropeana ny andevo Afrikana voalohany, niara-nampiasaina tamin'ireo vahoaka vazimba teratany hananganana ireo tanànan'ny voanjo maro ao amin'ny “Tany Vaovao”.
Sarintany Britanika tamin'ny taona 1976, ahitanao ny faritany antsoina hoe : Antilles, izany hoe ny nosy Karaiba sy Bahamas. Hita eto ihany koa i Venezoelà Kaontinantany amin'izao fotoana izao.
Taorian'ny taonjato maro, mandraka ankehitriny, dia mitoetra ho vavolombelona mangina eo amin'ny lalan'ny tantara ny morontsiraka Venezoelana . Maro ny taranaka Afrikana monina amin'ireo faritra ireny no misolotena ny lasa any ambadika sy ny harenan'ny ankehitriny. Tsy hita pesipesenina ny vakoka ara-kolontsaina narovan'ity vondrom-piarahamonin aty ho an'ny taranaka. Noho ny fahamaroan'ny fandrarana tsy hita isa nandritra ny vanim-potoanan'ny fanandevozana, dia teraka ny teny ara-panoharana nanafina ny fanaintainana nisy noho ny fanongotana an-keriny ny fototra ao anaty hiram-pitiavana malahelohelo. Ny hira fiasana kosa, etsy ankilany, manampy amin'ny fanalefahana ny havesatry ny asa tsy mety vita, ary nanampy ny zaza amin'ny fangalana torimaso kosa ny hira mandrotsirotsy.
Na ny mozika na ny dihy dia samy fomba enti-mifandray amin'ireo andriamanitra avy amin'ny fivavahana maro nentin'ny Afrikana nankany Karaiba, ireo andriamanitra tafiditra anaty fombam-pivavahana mifangaro sy ireo fankalazana laika maro.
Santionany amin'ireo karazana zavamaneno nolovain'i Venezoela tamin'i Afrika ny quitiplás, ny marímbula na ny lokanga tuyera, fa nisy tamin'ireo no novainy hifanaraka amin'ny toy ny azy ireo manokana. Mbola ilalaovana, ihirana, andihizana any amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena ireo fitaovana ireo; ary ampianarina ny teknikany.
Azo antoka fa tsy ireo mpandihy amin'ny lahatsarin'ny Camerino Company irery no finaritra amin'ny ampangamaroanaka sy ny dihin'ny morondranomasin'i Venezoelà. Manohy ny fomban-drazana mampiray an'i Venezoela amin'ny fimaroana rehetra ananany miaraka amin'ny ao faritr’i Karaiba rehetra ry zareo sy ny toa an-dry zareo, saingy mandritra izany fotoana izany ihany koa dia tsy manadino ny ratran'ny lasa tamin'izany fotoana izany ary mbola ezahina sitranina.